Shaxda rasmiga ah kulanka Premier League ee Kooxaha Manchester United iyo Crystal Palace oo la shaaciyey – Gool FM
(Manchester) 19 Sebt 2020. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Manchester United iyo Crystal Palace oo ku ballansan kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Manchester United ayaa xilli ciyaareedkeeda 2020-21 horyaalka Premier League si habsami leh u bilaabaysa caawa iyadoo Kooxda Crystal Palace ku soo dhaweynayaan garoonkooda Old Trafford.
Kooxda Man United waa kulankeedii ugu horreyey horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, halka Palace ay guul 1-0 oo ay ka gaartay Southampton ku furatay horyaalka kulanka caawana uu yahay keedii labaad oo ay ka ciyaari doonto Premier League.
Saxiixa cusub ee Man United Van De Beek ayaa kursiga keydka ku soo bilowday, waxaana khadka dhexe ciyaaraya oo safka hore ka mid noqday Scott McTominay.
Zaha oo kabtan ah ayaa hoggaaminaya kooxda martida ah, iyadoo weerarkana uu ugu soo bilowday Ayew.
Man Utd XI: De Gea, Lindelof, Pogba, Maguire, Shaw, Martial, Bruno Fernandes, Daniel James, Fosu-Mensah, Rashford, McTominay
Keydka Man Utd: Ighalo, Fred, Bailly, Dean Henderson, Van de Beek, Wan-Bissaka, Greenwood
Crystal Palace XI: Sakho, McArthur, McCarthy, Kouyate, Guaita, Ward, Townsend, Jordan Ayew, Zaha, Schlupp, T. Mitchell
Keydka Palace: Hennessey, Martin Kelly, Milivojevic, Batshuayi, Meyer, R. Inniss, E. Eze